Iwe Unofanira Kuva Unombomutsidzira Iyo Peji Iyo Yakanyanya Yakatarwa? SEO Nhema | Martech Zone
SEO Manyepo: Iwe Unombofanira Kuvandudza Peji Iyo Yakanyanya Kuverengerwa?
NeChishanu, Kurume 5, 2021 NeChishanu, Kurume 5, 2021 Douglas Karr
Mumwe wandaishanda naye akandibata akanditumira saiti nyowani kumutengi wavo ndokubvunza rairo yangu. Akataura kuti an SEO mubatsirit iyo yaishanda nekambani yakavayambira kuti vaone kuti iwo mapeji avakange varongedzerwa kuti asashandurwe neimwe nzira vangangorasa chinzvimbo chavo.
Izvi hazvina maturo.
Kwemakore gumi apfuura ndanga ndichibatsira mamwe emakemikari makuru epasirese kutama, kuendesa, uye kuvaka marongero ehukama akaisanganisira chinzvimbo che organic senzira yekutanga yetarisiro uye inotungamira. Muzviitiko zvese, ini ndakabatsira mutengi kukwidziridza mapeji epamhepo pari zvino uye zvemukati zvakabatana nenzira dzinoverengeka:
Kubatanidza - Nekuda kwemaitiro avo ekugadzira zvemukati, vatengi vaiwanzo kuve neakawanda emapeji asina kusarudzika mapeji anga ari akafanana zvakafanana zvirimo. Dai vaive vane gumi nembiri mibvunzo inokosha; semuenzaniso, nezve musoro wenyaya… vanonyora gumi nemaviri mablog. Vamwe vakatora zvakanaka, vazhinji havana. Ini ndaizogadzirazve peji racho ndorigadzirisa nemibvunzo yese yakakosha kuita chinyorwa chakanyatsorongedzwa, ini ndinoendesa mapeji ese kune iyo yakamisikidza yakanakisa, kubvisa yekare, uye tarisa peji racho rakakwira mudenga. Ichi hachisi chinhu chandakamboita kamwe chete… ndinozviita nguva dzese kune vatengi. Ini ndinonyatso zviita pano pa Martech Zone, Zvakare!
mamiriro - Ini ndakagadziridza peji slugs, misoro, dzakashinga mazwi akakosha, uye mamaki akasimbisa nguva dzese kuronga zvirinani mapeji emhando yepamusoro yemushandisi. Vazhinji varairidzi veSEO vangangonetsekana pakudzosera peji rekare slug kune nyowani, vachitaura kuti zvaizoita kurasikirwa neimwe yesimba rayo painogadziriswa. Zvekare, ini ndakaita izvi pane yangu saiti kasingaperi uye pazvakanzwisisika uye zvinoshanda nguva dzese dzandakazviita zvine hungwaru.
gutsikana - Ini ndadzokororazve misoro yezvinyorwa uye zvemukati kuti ndipe zvimwe zvinomanikidza, kumusoro-kune-kwazvino tsananguro izvo zvinonyanya kufadza kune vashanyi. Kazhinji kacho ndinodzora izwi-kuverenga pane peji. Kazhinji, ini ndinoshanda mukuwedzera kuverenga kwemazwi, ndichiwedzera zvimwe zvikamu, ndichiwedzera magirafu, uye ndichiisa vhidhiyo mune izvo zvirimo. Ini ndinoedza uye ndinogonesa meta tsananguro dzemapeji ese nguva yekuyedza uye kutyaira zvirinani kudzvanya-kuburikidza nemitengo kubva kune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji.
Mavhiki mashoma apfuura, ini ndakanyora nezve maitiro Ziva mikana yeSEO kuvandudza chinzvimbo chekutsvaga uye ndikataura kuti ini ndaona raibhurari yezvinyorwa semukana wakakura wekutyaira kuwedzera chinzvimbo. Ini ndakaronga 9th yechinyorwa changu.
Ini ndanyatso gadziridza yechinyorwa, ndichivandudza musoro wechinyorwa, iyo meta zita, meta tsananguro, kusimudzira chinyorwa pamwe nemamwe mazano akagadziridzwa uye manhamba. Ndakaita ongororo yemapeji ese emakwikwi angu kuti ndive nechokwadi chekuti peji rangu raive rakarongeka zvirinani, kusvika pari zvino, uye rakanyorwa zvakanaka.
Mhedzisiro yacho? Ndakafambisa chinyorwa kubva chinzvimbo che9th kusvika pachinhanho chechitatu!
Mhedzisiro yeiyi yaive yekuti ini yakapetwa kaviri peji maonero pamusoro peiyo nguva yapfuura kubva ku organic traffic:
SEO Iri Nezve Vashandisi, Kwete MaAlgorithms
Makore apfuura, izvo aiva zvinogoneka kumitambo algorithms uye iwe unogona kuparadza chinzvimbo chako nekuita shanduko kune yako yakarongedzwa zvemukati nekuti maalgorithms ainyanya kutarisana nepeji hunhu pane mushandisi maitiro.
Google inoenderera mberi nekutonga kwekutsvaga nekuti ivo vanoruka zviviri nokungwarira. Ini ndinowanzo taurira vanhu kuti mapeji anozove akaiswa indexed yezviri mukati, asi akaiswa pachinzvimbo zvichienderana nemukurumbira wawo. Paunoita zvese, unokwidza chinzvimbo chako.
Kurega dhizaini, chimiro, kana zvirimo pachazvo zvikamira inzira yechokwadi yemoto yekurasa chinzvimbo chako senge nzvimbo dzinokwikwidza dzinokudziridza zvirinani zviitiko zvevashandisi nezvakawanda zvinobata zvemukati Maalgorithms anogara achifamba achienda kune vashandisi vako uye kufarirwa kwepeji rako.
Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuramba uchishanda pane zvemukati uye dhizaini yekugadzirisa! Semunhu anoshandirwa kubatsira vatengi neinjini yekutsvaga nguva dzese, ini ndinogara ndichifunga nezvehunhu hwezviri mukati uye ruzivo rwevashandisi pamusoro pema algorithms.
Ehezve, ini ndoda kuburitsa kapeti tsvuku kutsvaga injini ine saiti uye peji SEO zvakanakisa maitiro ... asi ini ndichaisa mari mukati kuvandudza ruzivo rwevashandisi nguva dzese nekusiya mapeji asina kuchinjika nekuda kwekutya kana kurasikirwa chinzvimbo.
Unofanirwa Kuvandudza Peji Iyo Yakanyanya Kuiswa Mukutsvaga Injini Mhedzisiro?
Kana iwe uri SEO chipangamazano uyo anopa zano kune ako vatengi kuti varege kumutsiridza avo ane-epamusoro-zvemukati zvemukati… Ini ndinotenda uri kuregeredza mumabasa ako kuvabatsira kutyaira yakavandudzwa bhizinesi mhedzisiro. Kambani yega yega inofanirwa kuchengeta yavo peji yezvinyorwa kumusoro-ku-kudhara, inoenderana, inomanikidza, uye ichipa yakagadziridzwa ruzivo rwevashandisi.
Zvakanakisa zvemukati zvakasanganiswa nepamusoro mushandisi ruzivo hazvingokubatsire iwe chinzvimbo chiri nani, zvichaitawo fambisa dzimwe shanduko. Ichi ndicho chinangwa chekupedzisira chekushambadzira zvemukati uye nzira dzeSEO… kwete kuyedza kudzikamisa algorithms.
Tags: zvemukati optimizationkugadzirisa zvirimoyakarongwa zvemukatiSearch Engine Optimizationseoseo nganokugadzirisa zvirimo
Yakawanda Email Kero Rondedzero Yekusimbisa, Kusimbisa, uye Kucheneswa
DanAds: Yega-Yekushambadzira Tekinoroji YeVaparidzi